» ब्याटल राउण्डमा को भन्दा को कम ? भाग–१ (भिडियो)
ब्याटल राउण्डमा को भन्दा को कम ? भाग–१ (भिडियो)
१४ आश्विन २०७६, मंगलवार १५:२४
चन्द्र घलान, १४ असोज । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो ‘द भ्वाईस अफ नेपाल’ को सिजन २ मा अहिले ब्याटल राउण्ड चलिरहेको छ । डिजिटल अडिसन हुँदै ब्लाईन्ड अडिसनबाट छनौट भएका ६४ जना प्रतियोगीहरुले अहिले ब्याटलमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यस भिडियो सिरिजको पहिलो भागमा हामीले ब्याटल राउण्डको पहिलो एपिसोडमा कसले कस्तो गाए ? अनि को बाहिरिए र को सेलेक्ट भए ? यसका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । भ्वाईस अफ नेपालका बारेमा अन्य भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानलका अन्य भिडियोहरु हेर्नुहोला । हेरौँ भिडियो–
ब्याटलको पहिलो एपिसोडको पहिलो ब्याटल टिम दिपको समूहबाट भएको थियो । जसमा मकवानपुरकी रमा घतानी यादव र झापाका विकास लिम्बु भिडेका थिए । ‘साराङ्गीको धुनले’ गीतमा प्रतिस्पर्धा गरेका विकास र रमामध्ये विकासले नकआउटका लागि बाजी मारे भने रमा बाहिरिईन् । सुरिलो स्वरकी धनी रमाले भ्वाईसको मञ्चमा आफुलाई चर्चित बनाउँदै बाहिरिईन् अनि दमदार प्रस्तुति दिएका विकास अझै अगाडि बढ्दै नकआउटमा भिड्ने तयारी गर्दैछन् । दोस्रो ब्याटलमा टिम राजुबाट पाल्पाकी अनुशा आचार्य र ईलामका विजय राई भिडेका थिए । उनीहरुले साँझ परेपछि बोलको गीत गाएका थिए । निकै नै रोमाञ्चक प्रस्तुति दिएका अनुशा र विजय मध्ये विजयले नकआउट राउण्डका लागि बाजी मारे । अनुशा ब्याटलबाट बाहिरिईन् ।
त्यस्तै तेस्रो ब्याटलमा टिम आस्थाबाट कोलोराडोमा बसोबास गर्ने सम्झना पाण्डे र संखुवासभाकी रीता राई भिडेका थिए । उनीहरुले जाउँ जाउँ रेलैमा बोलको गीतमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । यस ब्याटलबाट रीता नकआउटका लागि सेलेक्ट भईन् । राम्रो गाउँदा गाउँदै पनि विभिन्न कारणले बाहिरिनु परेकी सम्झनाले रीताका लागि पनि स्याक्रिफाईस गरेको आभाश दर्शकदिर्घले गरे । उनले सबैको मन जित्दै ब्याटलबाट बाहिरिईन् । कोच आस्थाको लागि यो ब्याटल निकै भारी सावित भयो । १३ औँ एपिसोडको अन्तिम ब्याटलमा टिम प्रमोदका सुशान्त गौतम र राजीव पाठकले प्रतिस्पर्धा गरे । गहिरो बोलको गीतमा तिनै जना कोचको स्ट्याण्डिङ अवेसन पाएको यो प्रतिस्पर्धाबाट सुशान्त गौतम नकआउटका लागि छानिए । राजिव बाहिरिनु परेता पनि उनले आफ्नो ट्यालेन्टलाई सबै सामु परिचित गराए । कोच प्रमोदलाई छनौटका लागि नै हम्मेहम्मे पारेका राजिवको आवाजको सर्वत्र प्रशंसा भयो ।